Nanoloana ireo fanivaivàna feno fanavakavahana, namoaka karatra mena ity klioba Katalàna mpilalao baolina kitra ity taorian’ny nandroahana ilay ekipan’ny tranainy · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Lourdes Sada Nandika (fr) i Emmanuel Longerstay, Annie-Laure Folligné, Sylvia Aimée
Voadika ny 16 Desambra 2019 16:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Français, Italiano, Español
Pikantsarin'ilay rakikira fanentanan'ireo #Orgullosas del Terrassa FC (Fières du Terrassa FC). Ampahany nalaina tao amin'ny fantsony YouTube.
Sabotsy 2 Febroary 2019, marobe ireo mpikambana avy amin'ny ekipan'ny tranainy tao amin'ny Terrassa FC no niteraka tranga manahirana tamin'ny niventesan-dry zareo fanivaivàna feno fanavakavahana vehivavy nataony an'ireo tovovavy mpilalao baolina kitra nefa iray klioba amin-dry zareo ihany. Tantara ratsy niafara tamin'ny fandroahana ilay ekipan'ny tranainy tsy hiatrika ny fifaninanana.
Araka ny mpitsara lalao, teo am-panaovana fanazarantena ireto farany, izay tokony hilalao rehefa vita ny an'ireo tovovavy, no nisy baolina tafiditry ny ekipa tovovavy mpivahiny sy ny fahataràna tamin'ny fandaharana ho an'ny lalao manaraka, ka nanosika azy ireo hanivaiva ireo tovovavy mpilalao, tamin'ny filazàna hoe : «mivoaha ny kianja, izao dieny izao, anjaranay izao no milalao. Tokony hajanona io lalao io, tsy tokony nilalao akory ianareo».
Namaly ireo tranainy ireo ny ampahany tamin'ireo mpijery sy ireo tovovavy mpilalao, saingy vao mainka nampiakatra ny habibian-dry zareo izany. Tsy niandry ela fa dia nanomboka niraraka ny fanivaivàna feno fanavakavahana : «Miverena any an-dakozia, ndeha mamafa trano, kisoa, tay ianareo», ireo no isan'ny teny voarakitra nandritra ny zava-niseho.
Nihamafy ny herisetra ka niafara tamin'ny fifampikasihana tànana, izay no antony nandraisan'ny mpitsara fepetra hampiato ilay lalao. Nanapaka hevitra ny hanao di-doha ireo tovovavy mpilalao, ka ny ekipan'ny Terrasa sy ny an'ireo vahiny, el Viladecavalls, dia niaraka nitorevaka teo amin'ny boribory afovoan'ny kianja hanakanana ireo tranainy tsy hilalao ny anjarany. Lahatsary iray an'ny fantsona Diari de Terrassa, nalefa tao amin'ny Youtube, no mirakitra ilzay zava-niseho :
Ny fanadihadiana nataon'ny Terrassa FC taty aoriana no namboraka avy eo fa lehilahy roa mpilalao no tao ambadik'ireny fanivaivana feno fanavakavahana ireny. Kanefa, noho ireo mpikambana rehetra tao anatin'ilay ekipa tsy nety nanondro azy ireo, fanapahankevitra noraisin'ny klioba ny nanilihana azy rehetra tsy an-kanavaka tsy ho afaka hiatrika ilay fifaninanana. Tao anaty hafatra iray navoaka teo amin'ny tranonkalany, nohamafisin'ilay klioba fa «hadisoana tena goavana ny fanaovana fanivaivàna feno fanavakavahana», tamin'ny nanampiany hoe :
Ny kliobanay, izay niasa, ary manohy miasa amin'ny heriny rehetra hisian'ny fitoviana, dia maniry ny hanipika fa ireo soatoavinay dia tena lavitry ny sary nomen [ny ekipan'ireo tranainy].
Noemí López, iray tamin'ireo tovovavy mpilalao ao amin'ny Terrasa FC, koa dia nibitsika izay tsy mampahazo aina azy momba ilay zava-nitranga, nampiarahany tamin'izany ny dika avy amin'ny fitànana an-tsoratry ny mpitsara lalao.
Mampalahelo raha mbola tsy maintsy miaina miaraka amin'ny kazarana toejavatra tahaka izany foana …
Maro ireo hafa mpampiasa Twitter no naneho ny fanohanany an'ilay ekipa tovovavy :
Totalmente lamentable lo de los veteranos del @TerrassaFC 🤷🏼‍♀️https://t.co/Z3SkXAAq8r
Toa isak'izay mahavita dingana iray mankany aloha ny #futfem, misy foana ireo sasantsasany tsy maintsy mivoaka ny lavabato nisy azy mba hisarika ny sain'ny rehetra.
Tena mahamenatra ny nataon'ireo tranainy avy amin'ny @TerrassaFC
Tamin'ny alàlan'ny fampitambaovao ho an'ny gazety, nanameloka ilay zava-nitranga ny Federasiônan'ny Fanjakàna espaniôla ho an'ny baolina kitra, nilaza fa laviny ireo “fanivaivàna feno fanavakavahana sy teny mahery” ary amafisiny fa “tsy azo ekena ao anatin'ny lalao baolina kitrantsika ireny fitondrantena ireny”.
Nisy ihany anefa feo sasantsasany niezaka ny hiaro na hanamarina ireo tranainy, tamin'ny filazàna fa na ireo lehilahy koa aza dia nahazo teny fanivaivàna. Ny fanehoankevitr'i mr nice, ao amin'ny 20 minutes, no ohatra iray amin'izany:
Tsy hoe te-hanamarina azy ireo aho akory, fa mba nosiatsiahana sy nanaovana teny manivaiva azy ihany koa ireo lehilahy mpilalao, ary tsy handeha hitomany ery an-joro ery ry zareo. Tsy nisafidy ry zareo ny hanao hoe “hivoara-mena aho ary hitsahatra tsy hifoka rivotra”. Raha fitoviana no tadiavin'ireo tovovavy ireo, [mila fantariny fa} mba manjo ny lehilahy koa ny toa izany.
Fanehoankevitra novalian'ny vehivavy iray , Makoke, izay niezaka ny nanazava ny tsy fitovian'ireo toedraharaha roa ireo :
(…) Ny mahazo teny fanivaivàna mandritra ny lalao baolina kitra iray, ratsy izany, fa tsy toy izany. Nefa rehefa lehilahy lehibe no miditra amin'ny fitenenana manivaiva ireo tovovavy aminà fehezanteny toy ny hoe : ndeha manadio tatatra! na ndeha miverina an-dakozia! fanavakavahana izany. Ary fanampin'izany, ry zareo tsy avy aiza fa avy amin'ny klioban'ny tena ihany, bandy tsy misy atidoha daholo ireny. Rehefa miteny aminà mainty iray ianao hoe hijodepvt@ mandritra ny lalao, ratsy izany. Raha miteny aminy ianao hoe negromierd@, fanavakavahana izany.
Ho an'ny maro mpampiasa aterineto, ny hafainganana sy ny fihenjanan'ireo manampahefana tao amin'ny klioba dia efa anton'ny fahafahampony.
Ho setriny, nitehaka ny hafainganana sy ny fihenjanan'ireo maanmpahefana tao amin'ny klioba ny ampahany betsaka tety anaty tambajotra sôsialy:
Tompokolahy/tompokovavy isany ao amin'ny TerrassaFC, tsotra fostiny, mankasitraka
Maneho fiovàna goavana amin'ny resaka kolontsain'ny fanavakavahana io fanapahankevitra noraisin'ireo tomponandraikitra ara-panatanjahantena io, kolontsaina izay nanaraka foana ny baolina kitra ary hita taratra any anatin'ireo teny fanivaivàna sy fanambaniana izay zakain'ireo vehivavy marobe izay miezaka ny hitompo koa ny kianja izay hatry ny fahagola no natokana ho an'ireo lehilahy.
Nandika (fr) i Emmanuel Longerstay